Kaydinta Maalgelinta iyo Warshadaynta Farsamada -Retool
Qaybaha Makiinadaha Cuntada
Daawaha Steel Qaybo
Qaybaha Daaweynta Dhulka
Koox farsamo oo xooggan
Shirkadda Retool waxay leedahay ku dhawaad ​​26 sano oo waayo -aragnimo ah kabka saxda ah Waxay kuu keeni doontaa xulasho, ku -habboonaan, iyo kharash tartan.
Shirkadda Retool waxay ku adkaysanaysaa horumarinta sayniska inay tahay dhiirrigelinta, tayada iyo niyadsamida sida isha hore loo sii wado. Waxaan raadineynay joogitaan amaah oo aad u fiican, tayo heer caalami ah iyo adeeg qaali ah. Waxaan si kal iyo laab ah u rabnaa inaan iskaashi la yeelano saaxiibbada shisheeye iyo kuwa gudahaba oo aan wada-abuurno mustaqbal qurux badan.
Waxaan tuuri karnaa mishiinno noocyo kala duwan oo badeecooyin ah iyadoo loo eegayo sawirrada ama muunadaha ay macaamiishu bixiyaan.
Shirkadda Retool waa lammaane lagu kalsoon yahay oo ku jira warshadaha kabka. Waxaan adeegsanaa kalsoonidaan waxaanan u adeegsanaa aqoonteena si aan u waafajinno shuruudahaaga kabka. Injineeradayadu waxay khibrad u leeyihiin dhammaan qaybaha warshadaha shubka. Waxaan had iyo jeer siinnaa mudnaanta ugu sareysa tayada waxaanan si adag u xakameynnaa nidaam kasta oo wax soo saar sida waafaqsan ISO9001.
Ku marooji Makiinadaha Furimaha Hilibka
Qaybaha Koronto -dhaliyaha
Shijiazhuang Retool Stainless Steel Products Co., Ltd. oo la aasaasay 1994. Retool wuxuu ku yaal Aagga Warshadaha Xinzhaidian, magaalada Shijiazhuang, oo leh gaadiid ku habboon iyo meel sare. Shirkadda Retool waxay ku takhasustay naqshadeynta iyo soo -saaridda dhammaan noocyada waalka iyo soo -saaridda qaybaha kabka maalgelinta iyo qaybaha mashiinnada.
No.3 Mingzhu Road, Aagga Warshadaha Xinzhaidian, Zhaoxian, Shijiazhuang, Shiinaha